दुई सय नयाँ पर्यटकीय स्थल थपिए
नेपालको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ पर्टकीय गन्तव्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, प्रचार प्रसार र पर्यटन गतिविधि बढाउनका
काठमाडौं : नेपाल आउने विदेशी पर्यटक खासमा कति छन् ? कहाँ कहाँ घुम्न जान्छन् । के के गर्छन् ? घुम्ने बहानामा अवैध धन्दामा पो सम्लग्न छन् कि ? अब सरकारले
भारतबाट कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिसिल्ड भित्रिएसँगै पर्यटक बढ्न सक्ने आशा छाएको छ । माघ १४ गतेबाट सरकारले खोप उपलब्ध गराएपछि पर्यटन क्षेत्रमामा पनि केही राहत मिल्ने संकेत देखेको हो । नेपाल
केटु चढ्ने आरोही के भन्छन ? भिडियोमा हेरौ
गच्छेअनुसार सहयोग दिन्छु ः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिमान राख्ने गरी हिमाल चढ्न जाँदा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएमा राज्यको तर्फबाट गच्छेअनुसार सहयोग गर्ने आश्वासनदिनु भएको छ । पाकिस्तानको माउन्ट केटु जाडोको सिजनमा आरोहण गरी
सामान्यतिर लम्किदैछ शहर(भिडियो सहित)
पौष २१,काठमाडौं । कोरोनाले बन्द रहेको सबै क्षेत्रहरु खोल्नेबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेकै बेला बसन्तपुर क्षेत्र लगायत उपत्यकाको घुम्न आउने अन्य स्थानहरु पूर्णरुपले सामान्य देख्न सकिन्छा। मानिसहरुको संख्या शहरभरि भरिभराउ देख्न
हटाईने भयो न्युरोडको छाता
पौष १९,काठमाडौं। न्युरोड-संकटा सडकमाथि राखिएको छाता आजदेखि हटाईने भएको छ। मानिसहरुको भिड अत्यधिक भयो भन्दै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा छाता हटाउनु परेको संकटा क्लबका सचिव आशिषमान सिंहले बताउनु भयो। घामछायाँसंग कुरागर्दै
नयाँ वर्षको नयाँ उल्लास (भिडियो सहित)
पौष १७, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय नयाँ वर्ष २०२१ को नयाँ उल्लास राजधानीमा पनि देखिएको छ। राजधानीको पर्यटकिय गन्तव्य ठमेल,दरबारमार्ग जस्ता स्थलहरुमा यसको चहलपहल भरिभराउ देखिएको छ। कोरोनाका कारण विगत एक